RAMATOA HITA FATY TENY ANDRAISORO
Ramatoa iray manan-janaka roa ary manodidina ny telopolo taona eo, no hita faty tetsy Andraisoro.
Ny masoandro mody no nampalahelo niarahana tamin-dry zalahy tarika Ambondrona tetsy Mahamasina omaly.
, toy ny mpikirakira facebook sy ny gazety na an-tsoratra io na an-tambazotra mba hanomezana fanazavana bebe kokoa manoloana ny toe-draharaha misy. Araka ny fampitam-baovao moa dia hisy ihany koa ny ady hevitra handinihana ity resaka pesta ity izay hiarahana amin’ny sampan-draharahan’ny firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza na ny Unicef etsy amin’ny Colbert Antaninarenina anio.
Hanaovana atrikasa mandritra ny roa andro, nanomboka omaly ny momba ireo olona marobe tsy fantatra tonga mipetraka eny amin’ny Cité Univesitaire eny Ambolokandrina, tantanan’ny CROUA. Raha araka ny fantatra mantsy dia tsy mpianatra avokoa ny ½-n’ireo olona mampiasa ny trano eny an-toerana. Hojerena araka izany ary hampahafantarina ny rehetra fa ny mpianatra ihany no manana zo hampiasa ny trano noho izany tokony hanara-dalana ny rehetra.
Mitaraina noho ny fitsanganana pylone iray ao amin’ny faritra misy azy ireo mponina ao amin’ny Fokontany Malaho, Bevalala, kaominina Andoharanofotsy. Nilaza ireo olona nametraka izany, raha araka ny fitarainan’izy ireo hatrany fa efa nahazo alalana avy amin’ny tompon’andraikitra koa hanaovan’ny mponina antso avo dia tokony hidinan’ny Ben’ny tanana eny an-toerana hanazavana marina ny mikasika ity pylone natsangana ao Malaho ity.
Tsy vitsy amin’ireo sekoly tsy miankina eto amintsika amin’izao fotoana izao no manao fanentanana manokana momba ny ady amin’ny aretina Pesta. Tafiditra ao anatin’izany ireo sekoly tsy miankina sasany etsy Anosibe, hahafahan’ny ankizy mitandrina raha mahita voalavo maty miparitaka eny rehetra eny sy manao fanentanana ny fianakaviany mba samy hanadio ny tananany.
Hanaovana ezaka manokana ny fanadiovana ireo lakan-drano ao amin’ny Boriborintany fahaenina ato ho ato. Ny kaominina Antananarivo renivohitra no hiantoka ny fitaovana rehetra amin’izany hisorohana ny tondra-drano mandritra ny fotoam-pahavaratra. Nanamafy moa ny teo anivon’ny kaominina fa mbola izy ireo ihany koa no angady nananana sy vy nahitana ny asa fanamboarana ilay lalana mampitohy an’Ivandry sy Cité Analamahitsy. Efa ny 80%-n’ny asa no vita ankehitriny, vatsian’ny banky iraisam-pirenena vola.
Hotontosaina etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 4 sy 5 oktobra izao ny fampirantiana goavana momba ny fampindramam-bola na ny salon de la Microfinance, des Banques et des Assurances. Araka ny fanazavana dia asaina amin’izy ity avokoa na olon-tsotra, na mpiasam-panjakana ary mazava ho azy moa izany fa isany rahateo ireo mpivarotra sy mpandraharaha. Ny fampindramam-bola, fandefasam-bola amin’ny finday, ny fanaovana petra-bola ary ny fiantohana ara-tsosialy sy ny tolotra ara-bola rehetra manaraka ny teknolojia vaovao dia samy hohazavaina amin’ity hetsika ity avokoa ny mombamomba azy.
Mitohy hatrany ny fanarenana sy fanatsarana ireo lalana hita ho misy fahasimbana ao an-drenivohitr’Antsiranana ao amin’izao fotoana izao, rah any fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Tsy tafiditra ao anatin’izay fanatsarana izay kosa anefa aloha ny lalan’I Befatouma izay mampifandray an’I Lally Tolendale sy Colbert. Volan’ny kaominina madiodio, raha ny fanazavana, moa no hamatsiana izay fanamboaran-dalana izay ary orinasa sinoa kosa no manatontosa izany.
Ao anatin’ny fankalazana ny faha 60 taona nisian’ny fiantohana sosialy ara-dalàna teto Madagasikara dia miainga ny tetikasa fametrahana eo anivon’ny tahirim-bola ho an’ny fitsinjovana ny sosialy na ny CNaPS etsy 67 ha ivontoerana natao hihainoana sy hijerena ny azo hanatsarana kokoa izay fitsinjovana ny sosialy izay. Tafiditra ao anatin’izay ny fiahiana ireo fianakaviana fadiranovana.
Nihaona tamin’ny kestora voalohan’ny antenimierandoholona, Morad Abdirassoul, tetsy amin’ny biraony etsy Anosy omaly ireo tompon’andraikitry ny kaominina ao Ambohimanga, distrikan’i Manjakandriana. Ny resaka ara-pahasalamana izay hita ho tsy tomombana ao an-toerana moa no tena anton’ny fihaonana satria araka ny fanazavana dia tsy ampy ireo mpitsabo any an-toerana sady tsizarizary ihany koa izay tontolon’ny fahasalamana izay.
Efa tonga ao Mananjary amin’izao fotoana ny gropy lehibe mitondra tanjaka 320 kw hamahana ny delestazy izay tena nampikaikaika ireo mponina any an-toerana tao ho ao. Heverina, hoy ny solombavambahoaka izay lany tany an-toerana, Cathy, fa hivaha ato ho ato ny olana. Efa mizotra tsikelikely ihany koa ankehitriny ny fitsinjarana vary avy amin’ny fanjakana ao an-toerana. Vokatry ny fandalovan’ny rivodoza sy ny tsy fahampian’ny rotsak’orana dia nisy fihenany ny voka-bary tany amin’iny distrika iny.
Antsiranana no mandray ny andro manerantany ho an’ny fahazoam-baovao eto amintsika amin’ity taona ity. Misy ny fampiofanana ireo mpanao gazety avy amin’ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana mba hivelarana kokoa eo amin’ny sehatra maha matihanina ka ny any SAVA sy DIANA ary Sofia no tsara vintana afaka nisitraka izany tamin’ity taona ity.
Ao anatin’ny fanomanan-tena amin’ny fihatrehana ny lalao fifanitsanana ahazoana ny tapakila ho amin’ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra na ny CAN 2019 dia hiatrika lalao ara-pirahalahiana 2 goavana ny Barean’i Madagasikara. Ny 4 oktobra izao dia hisinda kely atsy Ouganda ireto mpilalao ireto ary hitohy ao Iraka kosa izany ny 8 na 11 oktobra. Ireo mpila ravinahitra ihany moa, raha ny fanazavana, no tena ho kotranina mandritra ireo lalao.
Ny 6,7,8 oktobra izao moa no ho tontosaina ny rallye Shell helix izay karakarain’ny avy eo anivon’ny Asa Tana izay ahitana lalanjotra 12 karazana amina alavirana mitotaly 142 kilaometatra. Ny andro voalohany moa dia ho tontosaina amina lalana TMF ny karazan-jotra 2. Hanjohy ny lalam-pirenena faha 2 kosa ireo ambiny rehetra ao aorian’izay.